नयाँ सरकारसँग के चाहन्छ निजी क्षेत्र ? - नागरिक रैबार
नयाँ सरकारसँग के चाहन्छ निजी क्षेत्र ?
७ साउन, काठमाडौं । सरकार परिवर्तन भएसँगै निजी क्षेत्रको सक्रियता बढेको छ । हरेक दिनजसो निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीसँग भेट्दै आफ्ना माग राखिरहेका छन् । निजी क्षेत्रले नयाँ सरकारसँग अनिवार्य खोपको माग गरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै ३१ असारमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेट्यो । भेटपछि महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले निजी क्षेत्रका मागलाई मौदि्रक नीतिमा समेट्न सुझाव दिएको जानकारी गराए ।
उनका अनुसार निजी क्षेत्रले सरकारबाट खोपमा प्राथमिकता चाहेको छ । यसले फ्रन्टलाइनमा खटिएर काम गर्ने कर्मचारीमा खोप पुग्ने छ । फलस्वरुप आगामी दिनमा अर्थतन्त्र प्रभावित हुने गरी लकडाउन तथा निषेधाज्ञाको बाटोमा गइहाल्ने अवस्था आउने छैन ।
नेपाल उद्योग परिसंघले समेत प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दै सक्दो छिटो खोप ल्याउन र यो अभियानलाई सफल बनाउन सुझाव दिएको छ । उता, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले मंगलबार प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दै निजी कुल आयातको कुल १० प्रतिशत खोप निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकताका आधारमा प्रदान गर्न आहृवान गरेको छ । यसले संघ, प्रदेश, जिल्ला-नगर र गाउँस्तरका चेम्बरसम्म सहजै खोप पुर्‍याउन सकिने चेम्बरको भनाइ छ । उद्योगी, व्यवसायी, यद्योग तथा यातायात मजदुरले खोप लगाउँदा त्यसबाट अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लको भनाइ छ ।
बजेटका सहुलियतलाई निरन्तरता
सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटमा गत आर्थिक वर्षमा जस्तै विभिन्न मौदि्रक सुविधा दिएको छ । निजी क्षेत्रले यस्तो सुविधा निरन्तर जारी रहोस भन्ने चाहेको छ । महासंघले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा सोही प्रसंगलाई जोड दिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई ४ साउनमा भेटेको नेपाल उद्योग परिसंघले नीतिगत सहजीकरणमा सरकारबाट बढी अपेक्षा गरिएको जानकारी गराएको छ । परिसंघका अध्यक्ष सतिश कुमार मोरले प्रधानमन्त्रीसँग भनेका थिए, ‘आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन हामी प्रयासरत छौं, यसमा सरकारले नीतिगत र प्रक्रियागत सहिजकरण गरिदिनुपर्‍यो ।’
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा अहिले कार्यान्वयनमा रहेको बजेटमा परिमार्जन गर्ने कार्यमा जुटेका छन् । सो क्रममा अहिले प्राप्त सहुलियत कायम रहोस् भन्ने चाहना निजी क्षेत्रको छ । बजेटमा हुने संशोधनकै तयारीका कारण मौदि्रक नीति आउने समय समेत अझै अन्यौलमा रहेको छ ।
राहत प्याकेजको अपेक्षा
निजी क्षेत्रले राहत प्याकेजको माग कोरोनापछि पटक-पटक उठाएको थियो । अघिल्लो सरकारले मौदि्रक संयन्त्रमार्फत यसलाई केही हदसम्म सम्बोधन गरेपनि मजदुर, साना व्यवसायी र बेरोजगार नागरिकले अनुभुति हुने गरी राहत प्याकेज आउन सकेको छैन । वर्तमान सरकारले पहिलो निर्णय एक महिना भित्र राहत प्याकेज ल्याउने भन्ने गरेको थियो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशतसम्म राहत प्याकेज ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले साना तथा मझौला उद्यम-व्यवसायलाई सम्बोधन गर्न राहत प्याकेज ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले कोभिड प्रभावित व्यवसायीलाई राहत तथा पुनर्स्थापनाको प्याकेजसहित राहत कार्यक्रम छिट्टै ल्याउने जानकारी गराएका छन् । बुधबार समेत उनले निजी क्षेत्रका उद्योगीसामु यो प्रतिवद्धता दोहोर्याएका छन् ।
अहिले प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीको एक भाषणको भरमा सेयर बजारमा प्रभाव देखिन्छ । जसले पुँजीबजारलाई अस्थिर मात्र बनाएको छैन, असुरक्षित भान समेत हुने गरेको छ ।
वर्तमान अर्थमन्त्रीसँग लगानीकर्ताले पुँजीबजारको स्थिरता चाहेका छन् । लगानीकर्ताको यो भाव बुझेका अर्थमन्त्री शर्माले लगानीकर्ताको सुरक्षा गर्ने गरी नीति ल्याउने आश्वासन दिएका छन् ।
निजी क्षेत्रले सरकारसँग पटक-पटक माग गरेको विषय हो आत्मबल । लगानीको स्रोतका वैधतामा उठ्ने प्रश्नबाट निजी क्षेत्र पटक-पटक तर्सने गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयसँग समेत निजी क्षेत्र तर्सने गरेको छ । विदेशी लगानी ल्याउन सहज तर फिर्ता जान असहज हुने अवस्थाबारे निजी क्षेत्र चिन्तित छ ।
रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नभई उपभोगमा मात्र लगानी हुँदा नेपालबाट ठूलो रकम बाहिरिएको छ । यो रोक्न विशेष कार्यक्रमको अपेक्षा समेत निजी क्षेत्रले नयाँ सरकारसँग गरेको छ । एकातर्फ बढ्दो रोजगारी र अर्कोतर्फ खोजेजस्तो जनशक्ति नपाउने अवस्थाका बीचमा रहेको अवरोध हटाउन समेत राज्यले पहल गर्नुपर्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रले विभिन्न चरणको भेटमा सरकारबाट गरेको छ ।
अर्थमन्त्रीको तयारी के छ ?
अर्थमन्त्री शर्मासँग अर्थतन्त्रको विज्ञता छैन, तर सबैभन्दा बढी अपेक्षा निजी क्षेत्र र आम मानिस उनैमाथि गरिरहेका छन् । चौतर्फी चुनौतिका बीच अर्थतन्त्र सम्हाल्ने निकायको सर्वोच्च तहमा रहेका उनले सर्वप्रथम श्वेतपत्रमार्फत वर्तमान अर्थतन्त्रबारे औपचारिक धारणा बनाउने तयारी गरिरहेका छन् ।
केही दिन अगाडि अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले त्यसअगाडि भने आफूले अध्ययन गर्ने बताएका थिए । उनी अहिले विभागीय बिपि|mङमा समेत छन् । विकासे मन्त्रालयका सचिवहरुलाई बोलाएर विकास बजेट बढाउने उपाय माग गरेका उनले एकसाथ बजेट, स्वेतपत्र र आर्थिक प्याकेजमा काम गर्नुपर्नेछ । कम स्रोत र अत्यधिक अपेक्षाका बीच अर्थमन्त्रीको परीक्षा अब शुरु हुनेछ ।
चिनियाँ खोप लिएर नेपाल वायु सेवाको जहाज काठमाडौं आउँदै
नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहको केन्द्रीय समिति बैठकमा बिहीबारदेखि सुरु भएको छ । आजको पहिलो दिनको बैठकमा विजय पौडेल, झपट रावल, बलराम बाँस्कोटा, रामकुमारी झाँक्री, साविता भुसाल, शेरबहादुर केसी, रवीन्द्र अधिकारी, अनु नेपाल, चूडामणि जंगली, ठाकुर गैरे, भागवत विश्वासी, नागेन्द्र चौधरी, बलदेव चौधरी, भानुभक्त जोशीलगायतका केन्द्रीय सदस्यहरुले आफ्नो धारणा राखेको बैठकपछि नेता रघुजी पन्तले जानकारी […]
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेसम्म गरेका गल्ती स्वीकारेर आत्मआलोचना गरे पार्टी एकता हुने बताएका छन्।बिहीबार राजधानीमा बसेको आफू पक्षीय केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको बैठकमा बोल्दै नेता नेपालले ओली सच्चिन तयार नभए पार्टी एकता नहुने बताए। ‘हामी धेरै अघि बढिसकेका छौं। ओलीले गल्ती सच्याएर आउँछन् भने एकता हुन्छ नत्र हुन्न,’ केन्द्रीय […]
पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदा तयार पारेको छ । यो मस्यौदाले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लिएका कतिपय नीतिहरुमा ‘कोर्ष करेक्सन’ गर्न खोजेको देखिन्छ । काँग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको सात सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा संविधान संशोधनदेखि नेपाल वायु सेवा निगमको सञ्चालन सरकार आफैंले सञ्चालन गर्नेसम्मका विषयहरु समेटिएका छन् […]
काठमाडौं, साउन २१ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चौतर्फी दबाबमा छन् । एकातिर २४ दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् भने अर्कातिर नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशन तोकेको समयमै गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । बहुचर्तित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित नगरी नहुने चुनौती त छँदै छ । अहिले देउवासँग ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् मात्र छ प्रधानमन्त्री देउवाको […]
माधव पक्षको केन्द्रीय समिति बैठकमा भीम रावल सहभागी, सुरेन्द्र र योगेश अनुपस्थित
नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षीय केन्द्रीय समिति बैठकमा नेता भीम रावल उपस्थित हुँदा सुरेन्द्र पाण्डे र योगेश भट्टराई अनुपस्थित भएका छन् । यस्तै केपी ओली निकट मानिए पनि शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिँदा माधव नेपाल कित्तामा उभिएका प्रेम आले पनि बैठकमा सहभागी भएका छन् । नेपाल समूह निकट मानिने पाण्डे र भट्टराई पछिल्लो समय अलमलमा […]
ओली एकताको पक्षमा उभिनुपर्ने नेपाल पक्षीय स्थायी कमिटी बैठकको निष्कर्ष
बैठकपछि नेपाल पक्षीय स्थायी समिति सदस्य भीम आचार्यले बैठकले समसामयिक राजनीतिक र पार्टी एकताबारे एजेण्डा तयार गरेको भन्दै यसबारे केन्द्रीय समितिमा घनिभूत छलफल हुने बताए । उनले आफूहरु पार्टी एकताको सन्दर्भमा गम्भीर र संवेदनशील रहेको स्पष्ट पार्दै केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि ढंगले छलफल र निर्णय लिइने बताए । तर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिले […]